Ciidamada Ethiopia oo taangiyo ku weeraraya magaalada Mekelle – AfmoNews
Ciidamada Ethiopia oo taangiyo ku weeraraya magaalada Mekelle
Wararka ka imanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in Milatariga Ethiopia ay qorsheynayaan in ay taangiyo ku weeraraan magaalada Mekelle ee xarunta gobolka Tigray.
Milatariga ayaa uga digey shacabka ku nool magaalada Mekelle inay is ilaaliyaan oo goobo ay ku nabad galaan raadsadaan.
Afhayeenka militariga ayaa u sheegay warbaahinta dowladdu leedahay ee EBC Colonel Dejene Tsegaye in qeybaha xiga oo ah kuwa ugu muhiimsan ee hawlgalka, oo ah in la hareereeyo Mekelle iyada oo la adeegsanayo taangiyada, si loo dhammeeyo dagaalka aagga buuraleyda ah looguna sii gudbo aagagga difaaca.
Macluumaadka ku saabsan dagaalka ayaa ah mid si aad ah u xadidan, iyadoo sheegashooyinka dhinacyada oo dhan ay adag tahay in la xaqiijiyo sababtoo ah xiriirkii taleefannada iyo internet-ka ee gobolka ayaa go’an tan iyo markii ay colaaddu bilaabatay.
Labada dhinacba waxa ay sheegeen in ciidamada federaalku ay qabsadeen Adigrat, oo 116 km dhanka waqooyiga ka xigta Mekelle.
Dejene ayaa sheegay in dadka shacabka ah ee magaalada Mekelle oo ay ku nool yihiin nus malyan qof ay tahay in ay ka feejignaadaan halista.
“Illaa iyo iminka, waxa aan kaliya weerareynay bartilmaameedyada jabhadda saldhigyada u ah, laakiin marka laga hadlayo Mekelle way ka duwanaan kartaa taas,” ayuu yiri.
Ciidamada TPLF ayaan ka jawaabin hadalkan ka soo yeeray militariga Ethiopia.
Kumanaan ruux ayaa la aaminsan yahay in ay ku dhinteen dagaalka u dhexeeya ciidamada milatariga Ethiopia iyo jabhadda Tigreega.
Kulan qarsoodi ah oo dhex maray Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil iyo Dhaxal Sugaha Sacuudiga
The Paris Champs-Elysées lights their Christmas lights